Qorshaha Farmaajo ee muddo kororsiga iyo waxa ka dhalan kara!. Faallo - Horseed Media • Somali News
May 21, 2020Federal Republic of Somalia
Qorshaha Farmaajo ee muddo kororsiga iyo waxa ka dhalan kara!. Faallo
Farmaajo oo xilka loo dhaarinayo 2017
Maanta oo kale 20 sano ka hor, waxaa dalka Jabuuti ka socdey shirkii dib u heshiisiinta, ee dib loogu unkay Qaranimadii Soomaaliyeed, geeddi socodkaas waxa uu soo marey marxalado aad u kala duwan, waxaana dowlad kastaa ku soo shaqeysey duruufo aad u adag, waxaase jirtey in heshiis lagu ahaa in doorasho dhacdo afartii sanoba hal mar. Dowladkasta oo soo marta waxay soo gaarsiisey meel tan kale ka sii wadi karto, ma jirin dowlad Soomaaliyeed oo wadatey Ushii Nebi Muuse (cs), waxkasta waxay ahayd qori isu dhiib, haddii ay wax xalisey waxaa dhici karta in bilowgiisi dowlad kale lahayd, waxaa sooyaalkaas iyo isbedaladaas laga dhaxley waa in Dowladda Soomaaliyeed hesho degenaansho, aysan dhicin muran dhanka sharciga ah, ama aysan jirin cid diidan sharcinimada Dowladda Soomaaliya.
Dowladnimadu waa qori isu dhiib
Sida uu Horseed Media u sheegey siyaasi la soo shaqeeyey Madaxweyne Farmaajo, waxaa isla sanadkii 2017 la isla qaatey in shaqada ugu horeysa la geliyo Dowlad goboleedyada inta ay cusub yihiin la wiiqo awoodooda, haddii aan taas la sameyn ay dhacayso tii ku dhacdey Dowladdii Xassan Sheekh oo lagu khasabanaan doono ugu danbeynta in la dhiso Madasha Qaran. Waxaa loo arkey Dowlad goboleedyadu in ay yihiin caqabadii Xassan Sheekh ka hor istaagtey in aanu ku darsan kuna khasabtey in la qabto doorasho.
Jawaari waxaa lagu khasbay in uu is-casilo 2018
Somaaliya waxay heshiis ku tahay in afartii sanoba hal mar doorasho dhacdo
FARMAAJO 2016 OO TALO SIINAYA FARMAAJO 2020